Iindaba -Indlela esakhasayo yoshishini lokushicilela
Ithemba lokuphuhliswa kweshishini lokushicilela laseTshayina kule minyaka mihlanu izayo liqikelela ukutshintsha kwemeko yezoqoqosho eTshayina, uhlengahlengiso kubume bemizi-mveliso, ukwehla kwenzuzo kushishino lokushicilela, zingaphi izityalo zokuprinta nokupakisha ekufuneka zisombulule ingxaki yokutsiba ngaphandle Ingxaki. Kwaye ishishini lokuprinta kwixa elizayo liya kuba luhlobo luni lolawulo lophuhliso, lubonise ukuba loluphi uhlobo lwendlela yophuhliso, ikwaye ibe yinkxalabo enkulu yobungcali.
Kuyatshiwo ukuba imeko yomzi mveliso "lutshintsho olunye kwiminyaka emi-5". Ngokoluvo lwam, imeko yophuhliso lweenkampani eziphambili zokupakisha kunye nokushicilela ukuza kuthi ga ngoku unokuqikelela ithemba lokuthengisa kwicala lophuhliso lweefektri zaseTshayina kunye nokupakisha kwiminyaka emi-5 ezayo.
Umdibaniso wokuprinta kunye nokupakisha izityalo akunakuphepheka
Ingxelo yovavanyo lwedatha yakutshanje: Iindleko zeenkampani zaseTshayina ziyenyuka, kodwa inzuzo yentengiso yentengiso yehle kweyona isezantsi embalini.
Njengokuba kunjalo, umzi-mveliso wokuprinta awunako ukuyiphepha imeko iyonke kwaye unengxaki efanayo. Iindleko zentengo yoluntu ziyenyuka, indleko zokuqesha ezivenkileni okanye kwimizi-mveliso ayisiyiyo kuphela inyuka, kodwa inzuzo yokupakisha kunye nokuprinta isehla kakhulu.
Ngenxa yokungabikho kokhuphiswano, ezinye iinkampani zilwa nokhuphiswano lwamaxabiso ukugcina impilo isisiseko kwintengiso. Iinkampani ezininzi ezincinci neziphakathi eziphakathi zokushicilela zivala iivenkile zazo kwaye ziyarhoxa kwintengiso yentengiso phakathi kokunyuka iindleko kunye nokwehla kwenzuzo.
Ukuphepha kunye nokutshintsha komzi mveliso wokupakisha kunye nokuprinta kuya kubakho inani elikhulu lezinto ezincinci neziphakathi zokuprinta kunye nokupakisha izityalo ukuhlangabezana nokudityaniswa kwendlela zombini.
Ukuphuculwa koomatshini nezixhobo kuye kwaba yinto engenakuphepheka
Kuthekani ngendleko ezonyukayo zoluntu? Ukuba awufuni kukwenza iindleko eziphezulu zabasebenzi, kuya kufuneka wandise imveliso.
Kwaye eyona nto iphambili kukuphucula oomatshini benkampani. Ukuphucula ngokunyusa oomatshini kunye nezixhobo kunye netekhnoloji, kwaye ubeke endaweni yabasebenzi ngenaliti eyinkunzi efanelekileyo sisikhokelo sangomso.
Kutheni le nto kungabizi kakhulu ukutyala imali koomatshini nakwizixhobo zobuchwephesha kunasemsebenzini?
Ukusukela i-China ikukuwohloka kwezoqoqosho kwinqanaba langoku, ixabiso lentengiso loomatshini nezixhobo liphantsi kakhulu. Ukutshintsha abasebenzi ngoomatshini nezixhobo kukuphuculwa kwexesha elifutshane kulwabiwo lweeasethi ezinzileyo. Nangona kunjalo, ngenxa yokusebenza ngokuqhubekayo koomatshini kunye nezixhobo, ukusebenza okuphezulu kuya kufezekiswa.
Kwangelo xesha, amaxesha ahlukeneyo entengiso yentengiso anemigaqo eyahlukeneyo yokupakisha, iphepha lokuprinta, ukutshintsha ubuchwepheshe, ukuphucula oomatshini kunye nezixhobo banokuhlangabezana nemarike yokuthengisa ngokukhawuleza.
Qhoboshela ukubaluleka okukhulu ekupakisheni abathengi kunye namava okushicilela
Uyaqonda? Igama elithi "ngokwezifiso" limiliselwe ngokunzulu ezintliziyweni zabathengi, ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso kunye nokuprinta kuhambelana ngakumbi neemfuno zabathengi banamhlanje.
Ngokuphuculwa kwe-Intanethi kunye nokuphuculwa kwemigaqo ephuculweyo, ubungakanani obukhulu bokupakishwa kunye nokuprintwa kuncitshisiwe ngokuthe ngcembe.Ukuqaqambisa ubuntu, abathengi abaninzi bakulungele ngakumbi ukwenza iimpahla ezizilungele ngokwabo, ngelixa likudijithali enkulu ukupakisha izinto zoshicilelo, umba oprintiweyo unokwahluka ngokupheleleyo emntwini uye emntwini, usenza umba womahluko kunye noluntu.
Ke ngoko, iinkampani kufuneka zenze konke okusemandleni abo ukubonelela abathengi ngeenkonzo ezinamava ngokusekwe kwiimpawu zabo kunye neemfuno ezizezona.
Ukuprinta okupakishwa kwidijithali yesiNtu + yinto entsha
Iziphumo zenkqubela phambili kwilizwe liphela zibonisa ukuba okwangoku, iipesenti ezingama-85 zeenkampani ezishicilela iinkonzo zokupakisha emhlabeni zinokubonelela ngeenkonzo zokuprinta ezidijithali ezinkulu, apho iipesenti ezingama-31 zeenkampani ezishicilelayo zishicilela ukuba ngaphezulu kwe-25% Ingeniso yeshishini ephambili yokuprinta kwidijithali enkulu.Le ngxelo "ihamba ze" ukwazisa wonke umntu ukuba intengiso yentengiso yemigaqo emikhulu yokushicilela kwidijithali iya iphucuka.
Ngokubanzi, okwangoku, ukuprintwa okuphezulu kwidijithali e-China kuphela kwi-1%, kodwa ngokuphuculwa kokufuna ulwazi oluchanekileyo kunye nokuphuculwa kwemigaqo yokhuselo lokusingqongileyo, iindleko zokuvelisa kunye nokuvelisa kwamashishini emveli okushicilela Ukunyuka, kwaye ke ukupapashwa okukhulu kwidijithali kuyaphucuka ukusuka kwitekhnoloji yemihla ngemihla.Kwixesha elilandelayo lexesha, ukushicilelwa okukhulu kwempahla yedijithali kuya kuqaliswa kwinani elikhulu leendawo ezahlukeneyo zokushicilela, kwaye iinkampani zokuprinta zokupakisha ziya kukhetha enkulu Inani lokuprinta ukupakisha ngokwesiko ukwandisa ushicilelo lwedijithali, ukuhlangabezana neemfuno eziguqukayo zentengiso yentengiso.
Vumela iteknoloji ye-Intanethi ingenelele ekusebenzeni nasekulawuleni
Umzi mveliso we-e-commerce unokuqonda okuhle kwetekhnoloji ye-Intanethi Kwiminyaka yakutshanje, ukongeza kwiivenkile ezibonakalayo ezingaxhunyiwe kwi-intanethi, ukuprinta kunye nokupakisha iifektri zikhuphisana ukuvula iivenkile ezikwi-Intanethi ezisekwe kurhwebo lwe-e ukwandisa indawo yokuthengisa kwintengiso. Ngokubhekisele kwizixhobo ezisetyenzisiweyo, ulwalamano kubathengi kunye neenzuzo zenkampani, bahlala bethembele kwidatha yohlalutyo, ukwenzela ukuba benze utshintsho oluchanekileyo kutshintsho.
Ngokoluvo lwam, olu phuculo luza kukhula kwaye aluzukuhla kule minyaka mihlanu izayo. Inani elikhulu lokushicilela kunye nokupakisha iifektri ziya kuhambisa ishishini labo lokushicilela kwi-intanethi. Okwangoku, baya kufaka idatha enkulu ukuhlalutya idatha kunye nokukhuthaza kunye nokuthengisa iimveliso zabo ngengqondo yabanxibelelanisi.
Ke ngoko, ukubamba izixhobo ze-Intanethi kunye nokwenza ukuba amajelo e-intanethi inyathelo elifunekayo lokupakisha kunye nokushicilela iinkampani ukufuna ulwalathiso lophuhliso kule minyaka mihlanu izayo.
Kwiipakethe zeplastiki eziguquguqukayo, ifilimu esetyenziswa ngokufuthi ye-aluminium yahlulwe yangamacandelo amabini, i-CPP aluminium, i-PET aluminium, kodwa ngenxa yealuminium ifilimu edityanisiweyo kulula ukuvela into yokudlulisa i-aluminium, ethi izise ilahleko kumashishini amaninzi okupakisha. , Eli phepha, ukusuka kwindawo yokubopha, ubeke izisombululo ezahlukeneyo ukunqanda ukuhanjiswa kwefilimu yealuminium.
1. Amacandelo amabini e-polyurethane adhesive
1) Ukuncamathela okukhethekileyo kwifilimu ye-aluminium kusingathwa
Ukukhululwa kokuncamatheliswa kwesiqhelo okunyanzelekileyo kunye nokuncamathelisa kulula ukugcwala umaleko oqaqambileyo, kuchaphazela ukukhawuleza komaleko ogqityiweyo, owomileyo odityanisiweyo ukuba umphumo umbi, intsalela yesinyibilikisi inkulu kakhulu, emva kokunyanga amandla okubambelela aya kuhla, nokuba kugqityiwe ukwenzeka, kufuneka ukhethe Ubunzima beemolekyuli ezifanelekileyo, ukukhutshwa okunyibilikayo okuhle, zinombala ofanayo we-aluminium yesingxobo sefilimu yamandla aphezulu e-viscous ayizizo izinto zokubambelela ezizodwa.
2) Inani elifanelekileyo leglue lisetyenzisiwe
Isixa seglue sikhulu, kulula ukwenza isiphumo sokomisa asisihle, ukuze isincamathelisi sigalele ukutyabeka ialuminium, kwaye sandise nexesha lokunyanga, kulula ukuba kwenzeke into yokuhambisa ialuminium, ngoko ke isixa seglu kufuneka silawulwe kwindawo efanelekileyo, ngokwamava olawulo ngokubanzi kwi-2 ~ 2.5g.
3) Ukuncitshiswa kwearhente yokunyanga
Ukuphucula ukuthamba komaleko wokubambelela, kodwa ukuthintela nokuhanjiswa kokufakwa kwealuminium, okuhlala kusetyenziswa ukunciphisa inani learhente yokunyanga, le meko inokusetyenziswa kuphela ekupakisheni okulula nasekuhlubuleni iimfuno zamandla zeemveliso, iimveliso zepolyester aluminium ukuza kuthi ga ngoku kangangoko ukuba angasebenzisi le ndlela.
4) Phucula iqondo lobushushu lokomisa kunye nesantya somoya wendlela yokomisa
Kwinkqubo yefilimu yokulungiswa kweefilimu, kufuneka ngokufanelekileyo iphucule ubushushu bokomisa kwendlela yokomisa, umzekelo, ukonyusa i-5-10 degrees, kunye nokuqinisekisa isantya somoya kwiimitha ezi-5 / s ngaphezulu, yenza isinyibilikisi sinyibilike ngakumbi, sinciphise isisombululo Intsalela, ukongeza ungasebenzisa umgca womnatha ophezulu, ukutyabeka okuxineneyo nako.
5) Yandisa ukunyanga kwamaqondo obushushu kunye nokunciphisa ixesha lokuphilisa
Iimveliso zefilimu ezidityanisiweyo zenkqubo yokuphilisa kufanelekile ukuba ziphucule ubushushu bokuphilisa, zinciphise ixesha lokuphilisa, ukuze ukunamathela kunciphise ukungena komonakalo wealuminium, kuthintele ukuhanjiswa kwealuminium, ukuhambisa ulawulo lobushushu ngamaqondo angama-50-60 , ixesha kwiiyure ezingama-24 okanye njalo, thintela ukuphilisa ixesha elide.
I-6) Sebenzisa ifilimu esemgangathweni yealuminium
Ukuba iindleko ziyavuma, thenga umgangatho ophezulu wefilimu ekhanyisiweyo, njengaleyo yokugquma kwesiseko.
2. Ukuncamathela emanzini
I-1) yokupakisha imveliso elula, njengokutya okukhukhumezekileyo, ii-noodles ezikhawulezileyo kunye neminye imveliso, izixhobo ezisetyenziselwa ukugoba i-CPP aluminium, ubukhulu becala ukuze kulawulwe iindleko zemveliso, uninzi lwazo lusetyenziselwa izinto zokubambelela ezingena manzi, kwinkqubo yemveliso iminyaka, kuye kwavela kuphela ingxaki yokuhanjiswa kwe-inki, kunye nokuhanjiswa kwe-aluminised, kwangaxeshanye kuvavanyo lokwenyani, emva kokuba amandla e-peel edityanisiweyo anokufunyanwa ngaphakathi kwe-1 ON / ngaphezulu kwe-15 mm, anokuhlangabezana nomgangatho wolu hlobo lweemveliso zokupakisha.
2) Sebenzisa isincamathelisi esisekwe emanzini ukuvelisa iimveliso eziqaqanjisiweyo, i-aniline roller ISETYENZISA imigca engama-200, isixa seglue silawulwa kwi-1.2 ~ 1.8 yeegram, ukuqinisekisa inani elilinganayo lokutyabeka, ukusebenza kakuhle kokuma, okunganciphisi imveliso kuphela iindleko ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, kodwa zisombulule ngempumelelo ingxaki yamasalela enyibilikisi, ukuqinisekisa imveliso eqhelekileyo yabathengi.Ukunciphisa emva kwexesha ukuba intsalela yesinyibilikisi ishiye iziphumo ezibi kakhulu ngexesha elifanayo kwiimveliso ezipheleleyo ze-inki emhlophe, umphumo ulunge ngakumbi .